के चाहन्छन् पुरुष ? महिलाले जान्नैपर्ने कुराहरु… – Gokarneshwor Online News
के चाहन्छन् पुरुष ? महिलाले जान्नैपर्ने कुराहरु…
प्रकाशित मिति: १० माघ २०७४, बुधबार १४:४० सम्पादक: admin
अघिकांश पुरुष महिलाबाट आफू के चाहन्छन्, भन्न हिच्किचाउँछन् । तर, त्यसको अपेक्षा भने राखिरहन्छन् । अपेक्षा पूरा नहुँदा व्यवहार पनि बदलिने गरेका उदाहरण धेरै छन् । जानौँ, के चाहन्छन् पुरुषहरू महिलाबाट :
मधुर आवाज : पुरुषहरू महिलाले सुरिलो आवाजमा बोलेको मन पराउँछन् । महिलाको मधुर आवाजले पुरुषलाई प्रभावित पार्न र शान्त बनाउन पनि धेरै मद्दत गर्छ ।
कदर : आफूले गरेको कामको कदरको अपेक्षा पुरुषको स्वाभाव हो । आफ्नो काममा धन्यवाद मात्रै पाए पनि उनीहरू फुरुंग हुन्छन् । एजेन्सी